Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / Ukusasazeka kwe-2-Handle High-Arc yegumbi lokuhlambela kwi-Chrome
Ukuphakamisa imbonakalo yegumbi lakho lokuhlambela ngoyilo oludwebileyo, iiNcwadi eziBini eziKhawulelweyo zeNickel Bathroom Sink Faucet ziya kubonelela ubuhle bakho obungenasiphelo.
2321300C imiyalelo yokufaka
I-SKU: 2321300C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: igumbi lokuntywila kwigumbi lokuhlambela, bamba banzi, Ichrome etyheliweyo
Ndiyithengile le faucet ikakhulu kuba yayiyeyona yexabiso eliphantsi kuhlobo lwayo olukhoyo, kodwa ukufakwa lula kungenxa yoko ndiza kuyithenga kwakhona. Emva kokufaka izixhobo, ziqinisiwe endaweni ngezikrufu eziqhotyoshelwe kumantongomane kunokuba ziqinise amandongomane ngokuthe ngqo, okususa iintlungu zokuzama ukujikeleza isikrweqe esinexesha elide kwiindawo ezixineneyo phantsi kwesinki. Kwangokunjalo, umbhobho awufuni kugqwetha okanye ukujija ukuba uncamathisele, kodwa ngokulula ngokulula ungene kwimidlalo.
Iipitpicks zam kuphela kukuba icandelo lokuhambisa amanzi akukho lula ukulifaka kunayo nayiphi na enye, kwaye iiplastiki zombhobho zibonakala ngathi zitshiphu kwaye kunokwenzeka ukuba zinxibe kwaye ziphule iminyaka embalwa ezantsi emgceni, kodwa yonke into ilungile njengangoku . Ngokuqinisekileyo ncoma oku ngokulula kofakelo kuphela.
Ndaphinda ndaphinda ndaphinda ndaphinda ndakhangela indlela yoqoqosho yokunxiba igumbi lokuhlambela. Ezi mpompo zazilukhetho oluhle kakhulu. Kwakulula ukuzifaka kwaye zisebenze kakuhle. Ikhola yoqobo yokuhambisa amanzi yayinkulu kwisinki yam ukuvumela onke amanzi ukuba acofe ngokufanelekileyo. Ndabazisa kwaye bandithumela izinto ezincinci zokutshintsha. Le mveliso ibaluleke kakhulu kwaye inkonzo yabo ikhethekile.
Le yindawo efanelekileyo yokuhambisa isitya sokuhlambela. Inesitayile esicocekileyo. Ndilindele ukuba izibambo zibe zide kancinci, kodwa nje ukuba ndizisebenzise amaxesha ambalwa, zibonakala zilungile. Umyeni wam ufake yonke into ngokulula. Andiqinisekanga malunga ne-popup drain feature, kodwa okunene ndiyithanda ngcono kune-drain endala ye-lever kind. Igcina nje yonke into ijongeka ilula. Ndinokugqitywa kwe-chrome kwaye ndiyayithanda. Ixabiso lalibiza kakhulu kunabanye endandibajongile. Ndikulangazelele ukonwabela oku ixesha elide.
Sibeka iiseti ezi-2 zezi zinto kwigumbi lokuhlambela eliyinkosi. Izibambo zisebenza kakuhle. Baziva kwaye babonakala bebahle. Bangaphindeka kabini eLowes, njl.
Umbhobho uhanjiswa ngexesha kwaye bekulula kakhulu ukuwufaka. Kuthathe ixesha elininzi ukuyisusa indala kunokufaka itephu entsha.
Le tephu yeyokuhlambela kwigumbi lokulala eliyintloko. Besichukumisekile ngumgangatho wemveliso yexabiso
Le tephu yesinki yenziwe ngomgangatho ophezulu kakhulu. Iziva ngathi inzima njengegama lophawu lwexabiso. Iza nazo zonke iindawo eziyimfuneko kufakelo. Ukuba ibifakelwe iveki edlulileyo kwaye isebenza kakuhle ukuza kuthi ga ngoku! Ndiza kuhlaziya ukuba kukho into etshintsha.
Le tephu intle! Umgangatho ophezulu kwaye usebenza kakuhle! Ukungaqiniseki kwakundididekile kodwa ndandisakwazi ukuyifaka!
Ndiyayithanda le faucet! Khange ndiqonde xa ndiyiyalelayo ukuba ispout inokujikajika, nto leyo iluncedo olukhulu!
Yithande itepu entsha esetelwe kwigumbi lokuhlambela elisandula kulungiswa! Inamhlanje kakhulu kwaye intle.
Ndiyayithanda le faucet. Ngokwenyani ndathenga amabini kwaye bobabini bayadibana ngeendlela ezahlukeneyo zangasese. Ifikeleleka kwaye yomelele. Idreyini yokuphuma isebenza kakuhle kwaye kwakulula ukuyifaka. Kulula ukuyicoca kwaye inomdla kakhulu!
Ngokwenyani andinako nokusongela intloko yam ngexabiso lale faetet kwaye intle kwaye intle kanjani. Sasijonge ezifanayo kwiKhaya laseDepho naseLowe ngaphezulu kwexabiso eliphindwe kabini. Le yeyona faucet yesithathu yokuqala endakhe ndayifaka kwaye yayihlekisa ngokukhawuleza. Elona candelo linzima kukujonga yonke into ngamehlo kwaye uqiniseke ukuba zonke iziqwenga zontathu zilungelelana ngokugqibeleleyo. Kuxhomekeke kubude bomgca wokuhambisa owusebenzisayo ungaziqhagamshela ngaphambi kokufaka ishushu okanye ingqele endaweni, qiniseka nje ukuba unazo iziqwenga ukuze uziqinise. Ngokuqinisekileyo andinakuthetha izinto ezaneleyo malunga noku. Yinto enkulu kwaye i-100% ixabisa yonke ipenny !!
Kutshanje ndiye ndathenga kwaye ndafaka le faucet njengenxalenye yerekhodi yokuhlambela. Ndonwabe nyani ngesigqibo sam sokuthenga olu hlobo / imodeli ngaphezulu kwabanye endibajongileyo kwaye endibaqwalaseleyo. Umbhobho uyathandeka ngenkangeleko, usebenza ngokungenasiphako kwaye ucingelwe kakuhle 'kuyilo nasekwakhiweni kwawo. Imigca yokudibanisa ekhawulezayo yindibaniselwano yokwenyani kwaye yenza lula ukufakwa. Khange ndibenakho ukuvuza okanye iingxaki ngexesha lofakelo, kwaye okoko ndaqala ukusebenzisa itepu. Nangona kunikezelwe idreyini yokuphuma, kuba le ndlu yokuhlambela isetyenziswa yonke imihla, ndikhethe uhlobo oluthile lokuhambisa umbhobho ngebhasikiti yokubambisa ekhawulezayo ecocekileyo. Ndiceba ukufaka i-pop-up ebonelelweyo kwenye indlu yangasese engasetyenziswanga kungekudala.
Oku kujongeka kukuhle kumagumbi okuhlambela. Siphinde satshintsha izinto zethu ezindala zowe-1978 kwaye umahluko awukholeleki. Uxinzelelo luziva lomelele, kwaye iarch ephezulu yenza kube lula ukubeka izinto phantsi kwesinki. Ukulula kokufaka nako kundenze ndazithanda ezi mpompo zitshonayo.
I-Moen endala egumbini lokuhlambela yanikezela kwaye yaqalisa ukuvuza- ngaphandle kokulungiswa. Kufuneka indawo efikelelekayo. Ndinexhala ngale, kuba ixabiso beliphantsi. Ndamangaliswa kukufika kwayo. Ijongeka intle kwaye imiyalelo yayilula ukuyilandela kwaye kwakulula ukuyifaka (naxa ndinekati elixhumaxhuma lindijikelezile). Ndide ndafumana imeyile evela WOWOW ukuqinisekisa ukuba iyandisebenzela. Ndonwabe kakhulu ngokuthenga
Xa ndavula ukupakishwa okukhulu ingcinga yam yokuqala yayiqinisekile ukuba isulungekile, ukugqiba okuhle, ukudibanisa ubhedu oluqinileyo, kungene kwalula kakhulu… nditsho ukuba kuphela kwiveki kungabikho mava kubude bayo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku ndiyayithanda
Ndandithandabuza xa ndiyala oku ngenxa yexabiso. Ndiyalele iiseti ezi-2 zokuhlamba inkosi yam. Intle kakhulu!! Zibukeka zilungile kwaye zomelele. Uplamba wam wachukumiseka kakhulu. Okwangoku ndingacebisa kakhulu!
Oku bekuza kuthatha indawo yebhafu endala. Bendingalindelanga into entle kangaka! Ixabiso lalilihle, kungoko ndonwabile. Ukufakwa kwakuyimpepho. Akuzange kuthathe xesha ukuyifaka ngaphakathi. Kuthathe ixesha elingakumbi ukususa endala. Oku kukuthenga okuhle!
Kuhle i-ans kulula ukuyifaka. Ndiyayithanda idayagramu kwinkcazo yemveliso, endinika ukuzithemba ukuba iya kulunga iindawo ezikhoyo zombhobho kwigumbi lam lokuhlambela. Kwaye isebenza njengoko kulindelwe. Umbono uphelele.
Siyithengile le faucet yokuhlambela endaweni ye-Moen okanye ye-Delta ngenxa yomahluko wamaxabiso kwaye ukuza kuthi ga ngoku kulungile. Yimpompo yayo entle kakhulu kwaye ibisebenza kakuhle ukuza kuthi ga ngoku.
Uchukunyiswe kakhulu ngumgangatho kunye nokugqitywa kwale faucet. Intle ukuba ayilunganga kunegama elikhulu kunye nexabiso eliphantsi.
Wathenga le faucet endaweni yayo. Kulula ukuyifaka. Inembonakalo entle yanamhlanje. Easy ukucoca. Ngaphakathi iinxalenye lubhedu. Uthande ukukhupha amanzi. Umntu wam wathi yakhiwe ngcono kunompompo wethu omdala obiza kakhulu.
Kufakwe iimpompo ezimbini ngeyure. Zibukeka zintle kakhulu. Sithande isimamva sokutyhala sifakiwe kunye neendlela zokuhambisa amanzi. Ukuza kuthi ga ngoku le mveliso lixabiso elifanelekileyo lemali yakho
Yithanda indlela ezijongeka ngayo! Yenza igumbi lokuhlambela libukeke. Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye inembonakalo entle eyenza ukuba kube lula ukuyicoca. Ukusebenza kakuhle kakhulu kunye nokuhamba kwamanzi okukhulu.
Uphuculo olukhulu kuseto lwangoku oluthengwe ngekhaya. Iindleko ezindala zokusetha ngaphezulu kweedola ezili-120 kwiindawo eziphantsi / kwidepho yekhaya. Le modeli ivumela ukuhamba kwamanzi okungcono, izinto ezintsha kunye nokufakwa ngokulula ngexabiso elifanelekileyo. Umgangatho ubonakala umkhulu!